Awards | Myanmar Health Research Congress
First Prize Expression and characterization of PLA2 clone derived from Russell’s Viper
(Daboiasiamensis) Venom Gland
မြွေပွေး၏ အဆိပ်ဂလင်းတွင် ပါဝင်သော PLA2 အင်ဇိုင်းမျိုးဗီဇ အစဉ်အတန်းကို ဓါတ်ခွဲခန်းတွင် ပရိုတင်းအဖြစ် ပုံတူမျိုးပွားခြင်းနှင့် ၄င်း၏ ဓာတု ဂုဏ်သတ္တိ များကို လေ့လာသည့် သုတေသန Thet Thet Mar, Zaw Myint, Aung Zaw Latt, Tin Ko Ko Oo, Thuzar Hla Shwe, Hsu Mon Aung,Lwin Zar Maw & Nwe Ni Aung
Second Prize Effect of Amlodipine on pharmacokinetics of metformin in healthy volunteers
ကျန်းမာသောပုဂ္ဂိုလ်များတွင်Amlodipine သွေးတွင်းဇီဝဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှုကို Metformin က မည်သို့လွှမ်းမိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းသုတေသနပြုလုပ်ခြင်း။
Khine Kyaw, Aye Soe,, Yee Yee Tin, Nu Nu Aye & Latt Latt Win
First Prize Clinical and Haematological predictors of Dengue infection among children with acute febrile illness visiting General Practitioners in Periurban settings, Yangon
ရုတ်တရက်ဖျားနာသော ကလေးများတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဟု ညွှန်ပြသော ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် သွေးတွင်းရှိ ဓါတ်ပစ္စည်းများကိုလေ့လာသော သုတေသနလုပ်ငန်း Win Lai May, Aye Aye Win, Han Win, Myo Myo Mon, Swe Zin Soe, Baby Hla, Dam Lian Pau, Hla Win Aung and Kyaw Zin Wai
Second Prize The effect of amlodipine on insulin sensitivity in prediabetic hypertensive patients
Amlodipine ၏ အင်ဆူလင်အာနိသင်အပေါ် သက်ရောက်မှုကို ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နိုင်ချေရှိသော သွေးတိုးလူနာများတွင် လေ့လာခြင်း Kay Yi Htun, ThidaTun, Nu Nu Aye
First Prize Is community intervention effective for improving maternal, newborn and child health care in hard to reach areas of Chin State, Myanmar?
မြန်မာနိုင်ငံ၊ချင်းပြည်နယ်ရှိသွားလာရန်ခက်ခဲသောဒေသများတွင်လူထုအခြေပြုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် မိခင် မွေးကင်းစနှင့် ကလေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပါသလား။ Myo-Myo Mon, Kyaw-Min Htut, Aung-Ye-Naung Win,
Myo-Win Tin, Khin Zaw, Zin Mar Aye, LwinLwin Ni, Ni Ni Htay Aung
Cyclooxygenase-2 (COX-2) immunoexpression in colorectal adenocarcinoma
Cyclooxygenase-2 (COX-2) immune ဖော်ပြမှုကို အူမကြီးနှင့်အစာဟောင်းအိမ်ကင်ဆာ ရောဂါတွင် လေ့လာခြင်း၊၊ May Thu Khine, May Thwe Lin, Myint Myint Nyein, Myat Mon
Effects of Morinda citrifolia Linn. (Ye-Yo) fruit juice on serum lipid profile and serum uric acid in hyperlipidemic patients
သွေးတွင်းအဆီဓါတ်များသောလူနာများတွင် ရဲယိုသီးဖျော်ရည်၏ သွေးတွင်းအဆီဓါတ်နှင့် သွေးတွင်းယူရစ်အက်ဆစ်ဓါတ်အပေါ် အာနိသင်သက်ရောက်မှု Mya Kyi Zin, Thida Tun, Nang Hla Hla Win
Promoting Healthy Living of Rural Elderly People through health promoting interventions: Quasi-experimental study
ကျေးလက်နေသက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ ကျန်းမာသော နေ့စဉ်ဘဝနေထိုင်နည်း အလေ့အထများကို သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခြင်းဖြင့်ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ပေးခြင်း Ohmar Myo, Ni Ni Aung, Nang Voe Phan
First Prize Revealing genetic determinants of Mycobacterium tuberculosis fromaHIV-associated tuberculous meningitis patient by whole genome sequencing in Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခုခံအားကျဆင်း ရောဂါပိုး နှင့်ဆက်နွယ်နေသော တီဘီဦးနှောက်အမြှေးရောင် ရောဂါ လူနာမှ တီဘီရောဂါပိုး၏ ဗီဇဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကို whole genome sequencing နည်းပညာ ဖြင့် ဖော်ထုတ်ခြင်း။ Aye Su Mon, Sabai Phyu, Myat Htut Nyunt, Phyu Win Ei, Kay Thi Aye, Hnin Ohnmar Soe, Mi Mi Htwe, Wint Wint Nyunt and Wah Wah Aung
Second Prize Larvicidal and repellent properties of Citrus maxima (ကျွဲကောသီး) and Citrus curantifolia (သံပုရာသီး) fruit peels essential oil against Aedes aegypti mosquitoes
တိုင်းရင်းဆေးပင်မျိုးများဖြစ်သည့် ကျွဲကောသီးနှင့်သံပုရာသီးခွံအဆီဖြင့် ပိုးလောက်လန်းသေစေနိုင်စွမ်းနှင့် ခြင်မကိုက်အောင်တားစည်းနိုင်စွမ်းကို သွေးလွန်တုပ်ကွေး ​ရောဂါပိုးသယ်ဆောင်သော အေးဒီးစ်ခြင်နှင့် သားလောင်းများအပေါ်စမ်းသပ်ခြင်း Maung Maung Mya, Zar Zar Aung, Win Win Maw, Aye Win Oo, Than Myat Htay, Chit Thet Nwe, Thu Zar Nyein Mu, Sein Thaung and Yan Naung Maung Maung
Third Prize Health literacy on Tuberculosis, health seeking behavior and satisfaction to public diagnosis and treatment services among Tuberculosis patients registered in Mandalay Region, Myanmar
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိတီဘီလူနာများ၏တီဘီရောဂါနှင့်ပတ်သက်သောအသိပညာ၊တီဘီ ရောဂါအတွက်ဆေးကုသမှု၊ရှာဖွေမှုနှင့်တီဘီဌာနများ၏ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် စိတ်ကျေနပ်မှုအခြေအနေများအားဆန်းစစ်သောသုတေသန Kyaw Thu Soe, Ko Ko Htwe, Kyaw Ko Ko Htet& Thandar Thwin